Home Wararka RW Rooble oo lagu celiyay doorkiisa hore & Famaajo oo si buuxda...
RW Rooble oo lagu celiyay doorkiisa hore & Famaajo oo si buuxda ula wareegay Doorashada
Farmaajo oo habeenadii u danbeeysay kawaday Villa Soomaaliya kulmo uu kula kulmayo qaar kamida waxgaradka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa u muuqda in uu dib ula wareegay hogaanka geedi socodka doorashada iyo qaybo kamida howlaha Amniga.
Qoraalada ka soo baxay xafiiska Farmaajo ee looga horimaanayo magacaabida ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u soo magacaawday dhexdhexaadinta ariamaha Doorashooyinka ayaa tusaale cada u ah in uusan RW rooble gacabtiisa waxba ku jirin.
Sidoo kale xukumadiisa oo ahayd in ay iyada la wareegto xiriirka dib u soo cusboonaaday ee u dhaxeeya ladada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, ayaa waxa hada si toos ah u maamulaya Farmaajo, iaga oo istcimalaaya wasiiradii uu ku darsaday golaha Wasiirada.
Hadaba waxa isweeydiin leh, halkeey ka baxday balantii uu qaaday RW Rooble oo ahayd in uu isagu la weragayo arimaha doorashooyinka iyo amniga dalka. sadax mid baa run noqonaysa,
1) in ay dhaboowday/xaqiiqdoowday doqonimadii horay loogu xamaanayay Rooble oo loogu magaca daray “ Rooble la soo heloow”, taas oo ah in uu yahay shaqsi doqon ah oo aan hogaan dal qaban karin,
2) In uu qayb ka yahay qorsho lagu qiyaanay mucaraadka iyo shacabka Soomaaliyed taas oo salka ku haysa in uu Farmaajo hogaanka dalka ku sii nagaado, Rooble-na uu ka shaqeeyo in uu mada’daaliyo shacabka Soomaaliyeed
3) iyo in uu mas’uuliyadiisa qaato oo si buuxda ula wareego arimaha doorashooyinka iyo amniga dalka oo uu noqdo shaqsi is xureeyay.
Talabaada uu qaato waxa la arki doonaa maalmaha iyo saacadaha soo socda. Waxaa muuqata in Farmaajo uusan meel u soconin doonayana in uu fashiliyo arimaha doorashooyinka.